laacib » QORSHE: Manchester United Oo Dhigtay Qorshihii Ugu Dambeeyay Ee Ay Ku Qancinayso Anthony Martial & Xalka Ay Soo Wadaan Oo U Muuqda Mid Macquul Ah!!.
Kooxda Manchester United ayaa u muuqata mid salka u dhigaysa qorshayasha ay ku doonayso inay kooxdeeda mudo dheer kusii hayso da’yarka ree France ee Anthony Martial oo mudooyinkii ugu dambeeyay lala xidhiidhinayay inuu laacibkii ka baxayo.
Tababaraha laacibkii ee Jose Mourinho iyo Martrial ayaa u muuqday kuwo aan sii wada joogayn mudo dheer kaddib isku dhac toos ah iyo xidhiidh xumo labadan shaqsi ka dhex dhashay balse arrintaas ayaa u muuqata mid laga soo gudbay haatan.
Martial ayaa kulamadii ugu dambeeyay wacdaro usoo dhigayay kooxdiisa kaddib markii uu afar gool kasoo dhaliyay saddex kulan oo xidhiidh ah oo Premier League ah laacibkii ayaana haatan soo wada qorshe ay heshiis mudo dheer ah kaga saxeexanayso.
Qorshaha ay maamulka Man United maaganyihiin ayaa ah mid laga soo ogaaday il ku dhaw laacibkii, Shaqsiga wararkaas soo tebiyay ayaana sheegaya in Man United ay isticmaalayso awood dhaqaale oo ah sheeko qancin karta xiddigan si uu heshiiska u kordhiyo.
“Man United markasta waxay ku xalisaa lacagta marka ay danta ugu fiicani ugu jirto laacibkii, Sii haysashada Martial waa ujeedada ugu sarreysa haatan”